Safal Khabar - प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् कि नेकपा विभाजन हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् कि नेकपा विभाजन हुन्छ ?
शनिबार, २० असार २०७७, १५ : ५५
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको शक्ति संघर्ष उत्कर्षतिर गइरहेका बेला एउटा प्रश्न टड्कारो बनेको छ, अब नेकपा विभाजन हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् ? उत्तर सहज छैन ।
नेकपाभित्रै कतिपय नेताले छानविनका लागि माग गरे । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै छानविनका लागि माग गरे । तर प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको राजीनामा मागेर छानविनको दायराबाट उनलाई मुक्त गरिदिए । यसले पनि पार्टीको छविमा नराम्रो असर गरेको थियो । परिणामस्वरुप पार्टीभित्र कयौं नेताहरु प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति रुष्ट हुन थाले ।
पार्टीभित्र यी र यस्तै कारणले विवाद पन्पिदै थियो, त्यहीबेला गत वैशाखमा सरकारले एकाएक दुई अध्यादेश जारी ग(यो । राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई अध्यादेश सरकारले पार्टीतहमा छलफल नै नगरी ल्याएको थियो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले दल विभाजनसम्बन्धी कानुन खुकुलो तुल्याएको थियो भने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशले संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रतिपक्षी नेताको भूमिकालाई कमजोर तुल्याएको थियो । यी विधेयक ल्याउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमाथि प्रश्न उठ्न पुग्यो । यसमा विपक्षी दलहरुमात्र नभई सत्तारुढ दलकै नेता तथा सांसदले दुवै अध्यादेशको विरोध गरे । अन्ततः केही दिनमै सरकारले ती दुवै अध्यादेश फिर्ता लियो ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सम्बन्धी विवाद पार्टीले किनारा लगाउन नभ्याउँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एमसीसीका परियोजनालाई प्रवेश गराएपछि पनि नेकपाभित्र विवाद थप झाङ्गियो । एमसीसीबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित नेकपा कार्यदलको सिफारिस लत्याउँदै सरकारले बजेटमा एमसीसी परियोजनालाई समावेश गरेको थियो ।
ओलीको त्यो सम्बोधन
स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेका बेला र राजीनामाबारे पक्षविपक्षमा बहस भइरहेका बेला असार १७ गते बिहान प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले बालुवाटारमा केही नेताहरुलाई बोलाएर आफुलाई सहयोग गर्न भने । विवाद भइरहेका बेला ओलीले नेताहरुलाई बालुवाटार बोलाएपछि पार्टीभित्रकै विपक्षी मोर्चामा रहेका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र गौतमसहितका नेताहरुले सोही दिन अर्थात असार १७ गते नै खुमलटारमा नेताहरुसँग छलफल गरे । त्यो भेलाले पनि ओलीको राजीनामा नै रहेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
जेठ २ को त्यो सहमति
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता घोषणा अघि एक महत्वपुर्ण सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिमा केपी ओली प्रचण्ड विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । ५ बुँदे सहमतिमा समझदारीका आधारमा अघ बढ्ने, पार्टी एकताका संगठनात्मक सिद्धान्त, समानता, सम्मनजनक र न्योचित हुने, एकता महाधिवेसन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पुर्ण निर्णयहरु विधिसम्मत र कमिटिवद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षर पश्चात निर्णयको आधिकारिकता मानिनेलगायत छन् । सोही आधारमा बिहीबार बालुवाटारमा भएको अध्यक्षद्वयको बार्तामा तात्कालिन समय ९२०७५ जेठ २ गते० सहमति गर्दा साँक्षी बसेका महासचिव बिष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मासमेत सहभागी बने । जेठ २ को सहमतिमा दुई अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपछि मात्रै पार्टीको आधिकारिक निर्णय मानिने उल्लेख छ । सोही सहमतिअनुसार नेकपाको अन्तरिम बिधानमा पनि यो ब्यवस्था गरिएको छ ।
संसद अधिवेसन अन्त्यका लागि निर्णय
वल्लो भवनमा स्थायी समिति बैठक पल्लो भवनमा मनित्रपरिषद बैठक । त्यो पनि पार्टी नेताहरुबीच भएको सहमति विपरित थाहै नदिइ संसद अधिवेसन अन्त्यका लागि निर्णय गर्न । यति भएपछि संसद अधिवेसन अन्त्य गरेर अध्यादेशहरु ल्याउने योजना त होइन ? भन्ने प्रश्नहरु स्वभाविक उठे र त्यसबारे प्रचण्डले राष्ट«पति विद्यादेवी भण्डारीसँग समेत सोधखोज गरे ।
अब नेकपा कता जान्छ भन्ने विषय अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओलीमै निर्भर छ । अध्यक्ष ओलीले राजीनामा नदिएसम्म प्रचण्ड मान्नेवाला देखिँदैनन् । अध्यक्ष प्रचण्डलाई ब्याक गराउने अवस्था नभए पार्टी विभाजन भए होस् भन्ने मनस्थितिमा अध्यक्ष ओली देखिन्छन् । यसले नेकपा फुटको संघारमा पुगेको स्पष्ट हुन्छ ।
पार्टी एकताप्रति प्रतिवद्ध रहेको उपाध्यक्ष गौतमको दाबी
विवादले निकास नपाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले उनी पार्टी एकताप्रति प्रतिवद्ध...
पार्टीभित्रको असहमतिलाई विधि र पद्धतिबाट समाधान गर्न माग
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवा र...